Iraka solon'i Kristy
"Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo,solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe :mihavàna amin'Andriamanitra anie hianareo". 2 Kor.5:20.
Iraka solon'i Kristy isika,ary tokony ho velona, tsy ary hitandro ny voninahitsika, fa hamonjy ireo fanahy tsy ho very. Ny ezaka isan'andro ataontsika dia tokony haneho amin'izy ireo fa afaka ny hahalala ny fahamarinana sy hamarinina izy ireo. Tsy tokony hiezaka ny hahazo fangorahana isika amin'ny fanehoana amin'ny hafa fa toa natao tsinontsinona isika, fa tokony hanadino tanteraka ny tenantsika isika; ary raha tsy manao izany isika, satria tsy manana hetaheta mahay mandanjalanja ara-panahy sy manana fiainam-bavaka mahery vaika, dia hadinin' Andriamanitra amin'ny tanantsika ireo fanahy izay tokony ho niasantsika. Efa nanomana fitahiana ho an'ny mpiasa rehetra amin'ny asa fanompoany Izy hananan'izy ireo fahasoavana sy fahendrena, mba ho epistily velona, fantatra sy vakin'ny olona rehetra izy ireo.
Afaka ny hanatanteraka izay asain'ny Tompo hataontsika isika raha miambina sy mivavaka. Afaka manaisotra ny vato mahasolafaka eo amin'ny lalan'ny hafa isika, raha manatanteraka amim-pahatokiana sy amim-pitandremana fatratra ireo adidintsika ary miahy ireo fanahy hanadinana antsika. Afaka mambabo fanahy ho an'i Kristy isika amin'ny alalan'ny fampitandremana fiantsoana an-kitsim-po ary miaraka amin'ny saina tia mikarakara ireo izay ho very.
Iriko ny hahatsiarovan'ireo anadahiko sy rahavaviko fa zava-doza ny mampalahelo ny Fanahy Masina, malahelo Izy rehefa mitady hiasa irery ny olona, ary mandà tsy hiditra an-tsehatra amin'ny asa fanompoan'ny Tompo, satria hoe mavesatra loatra ny hazo fijaliana na lehibe loatra ny fandavan-tena. Maniry ny hitoetra amin'ny fanahy tsirairay avy ny Fanahy Masina. Raha ampandrosoina toy ny vahiny nomem-boninahitra Izy, dia ho tanteraka ao amin'i Kristy ireo izay mandray Azy. Ho vita ny asa tsara efa natomboka; maka ny toeran'ny eritreritra maloto, fahatsapana mibirioka ary fihetsika mikomy ny eritreritra masina, fitiavana ny zavatra any ambony ary ny flhetsika fanaon'i Kristy.
Mpampianatra avy any an-danitra ny Fanahy Masina. Raha mandray ny fampianarany isika, dia ho voavonjy. Kanefa, mila miambina ny fontsika isika, satria mazàna loatra no manao an-tsirambina ny tari-dalana avy any an-danitra izay raisintsika isika, ary mitady hanome fahafaham-po ireo fironana ara-boajanahary avy amin'ny saintsika tsy masina. Tsy maintsy miady amin'ny izaho-ny ny tsirairay. Raiso ireo fampianaran'ny Fanahy Masina. Raha izany no tanteraka, dia hiverimberina ao an-tsaina izany mandra-pahatonga antsika hahatsapa fa "miorina eo ambonin'ny vatolampy mandrakizay"